Windows 10 သည် နားကြပ်များကို မတွေ့ပါက၊ ၎င်းကို မည်သို့ပြုပြင်မည်နည်း။ | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Windows 10 သည် နားကြပ်များကို မတွေ့ပါက၊ ၎င်းကို မည်သို့ပြုပြင်မည်နည်း။
Cristian Garcia | 27/10/2021 09:11 | လည်ပတ်မှုစနစ်များ, Windows ကို
မနက်အိပ်ရာက နိုးတာ ဒါမှမဟုတ် နေ့ခင်းဘက်မှာ ကစားဖို့ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်လုပ်ဖို့ အိမ်ပြန်လာတာ၊ PC ကိုဖွင့်ပြီး အဲဒါကို သဘောပေါက်တယ်။ Windows သည် နားကြပ်များကို မည်သည့်နေရာတွင်မှ ရှာမတွေ့ပါ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းမသိလို့ ဘာမှ မကြားရတာကြောင့် ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးလို့ ထင်လဲ။ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် PC သည် အသံကုန်သွားခြင်း သို့မဟုတ် နားကြပ်များကို ထောက်လှမ်းနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ အဲဒါက မင်းအတွက် ဘယ်တုန်းကမှ မကြုံဖူးသေးဘဲ၊ အဲဒါကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာ မင်းမသိတဲ့အတွက် Windows က အသံပြန်ထွက်လာပြီး လက်တော့ပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒက်စ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြဿနာမရှိပဲနဲ့ အခုထိ အသံထွက်ပြီး ကိုယ့်ကွန်ပြူတာကို ပြန်သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒီကျရှုံးမှုရဲ့ အဆိုးဆုံးအချက်ကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့တွေမှာ ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲ bat မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာဖြစ်ပြီး Windows က များသောအားဖြင့် ရှင်းပြချက်တွေ အများကြီးမပေးပါဘူး။ ချို့ယွင်းချက်လေးများနဲ့ အချိန်ကာလကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ လည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုလို့ ဆိုကြပါစို့။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ၎င်းသည်ဟာ့ဒ်ဝဲပြဿနာမဟုတ်ပါက၊ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်သင့်တွင်နောက်ထပ်ရှုပ်ထွေးမှုများရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ကွဲပြားသော နည်းလမ်းများ သို့မဟုတ် ဖြေရှင်းနည်းများကို ရိုးရှင်းစွာ လိုက်နာရပါမည်။ ဤဆောင်းပါး၌သင်တို့ကိုငါတို့ဤနေရာတွင်ထားပါမည်။ ထိုနေရာမှ အရာအားလုံးသည် လှိမ့်ဝင်ပြီး အခြားနေ့များကဲ့သို့ စနစ်၏အသံကို စတင်ကြားရလိမ့်မည်။
1 Windows သည် နားကြပ်များကို ရှာမတွေ့ပါ- ၎င်းကို မည်သို့ပြုပြင်မည်နည်း။
1.1 Windows ပြဿနာဖြေရှင်းပေးသူကို အမြဲသုံးပါ။
1.2 အသံဝန်ဆောင်မှုကို ပြန်လည်စတင်ကြည့်ပါ။
1.3 သင်၏ အသံထွက်ရှိမှု ဆက်တင်များကို စစ်ဆေးပါ။
1.4 Drivers များကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
Windows သည် နားကြပ်များကို ရှာမတွေ့ပါ- ၎င်းကို မည်သို့ပြုပြင်မည်နည်း။
အဆုံးတွင် ဤအရာသည် အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲပြောသကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား လိုက်နာရန်နှင့် ပြုပြင်ရန် မတူညီသောအသေးစားသင်ခန်းစာများပါသည့် စာရင်းကို ချန်ထားမည်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် အခြားတစ်ခုထက် ပိုကောင်းသည်ဟု မဆိုလိုပါ၊ ၎င်းသည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သွားနိုင်သည်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဖြေရှင်းပြီး နောက်တစ်ခုနဲ့ မတွေ့တာက စမ်းသပ်တဲ့ကိစ္စပါ။ ဒီနည်းနဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းကို သိမ်းထားမယ်။၊ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ဖြစ်လာပါက၊ အနာဂတ်တွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ယခင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ဖြေရှင်းချက်ဆီသို့ တည့်တည့်သွားပါ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ပထမအချက်ကို အမြဲစစ်ဆေးသင့်သည်။ သင့်ဦးထုပ်ဆောင်းခြင်း သို့မဟုတ် နားကြပ်များ မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။. အကယ်၍ ၎င်းသည် စက်အရံချို့ယွင်းမှုဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်မှု အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို အခြား PC၊ လက်ပ်တော့ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို အတည်ပြုရန် သင်လက်ထဲတွင် ရှိနေသမျှကို ချိတ်ဆက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို နားကြပ်တွေမှာ အမှားအယွင်းမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ Windows က နားကြပ်တွေကို မတွေ့မိဘူးဆိုတာ လုံးဝသေချာတယ်ဆိုရင် အဲဒါကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ဆက်လုပ်နေပါတယ်။
Windows ပြဿနာဖြေရှင်းပေးသူကို အမြဲသုံးပါ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်း၏အမည်မှာ အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပြဿနာများကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Windows သည် သင့်နားကြပ်များကို မမှတ်မိသေးပါက၊ စနစ်ပြဿနာဖြေရှင်းပေးသူကို အသုံးပြုပါ။ Microsoft လည်း ပါဝင်ပါတယ်။သို့မဟုတ် စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ စာမျက်နှာတွင်ရှိမည့် ပြဿနာဖြေရှင်းသူ စီးရီးများ ၎င်းတို့သည် သင့်အား အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် ပြဿနာအားလုံးကို ဖြေရှင်းရန် ကူညီနိုင်လိမ့်မည် (ရိုးရှင်းသောကြောင့် သင်သည် နောက်တစ်ကြိမ်ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ နှိပ်ပြီး စောင့်ရပါမည်)။
အဲဒါကိုရှာဖို့အတွက် သင်သွားရမှာl ဆက်တင်များ၊ အပ်ဒိတ်နှင့် လုံခြုံရေး မီနူး ပြီးနောက် ပြဿနာဖြေရှင်းပေးသူကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းကို run ပြီးသည်နှင့်၊ ဤ internal Windows software သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ကြည့်ရှုရန် အသံဖွင့်ခြင်း option ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အချိန်မီ ပြန်ဖွင့်တာက တခြားအရာတွေထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ တခြားအချိန်တွေမှာ မင်းငါ့ကို ဖတ်ဖူးလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ စကားပဲ ။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းသောအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်အသံဝန်ဆောင်မှုကို ပြန်လည်စတင်ပါ။ ၎င်းကို မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို သင်တွေးမိပါက၊ သင်သည် ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကို လိုက်နာရန်သာလိုသည်-
လည်ပတ်ဝင်းဒိုးကိုဖွင့်ပြီး စတင်ပါ၊ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန် ၎င်းတို့ကိုမလွှတ်ဘဲ Windows + R ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ပြီး ဝင်းဒိုးပေါ်လာသည်နှင့် အတိအကျ services.msc ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ enter သို့မဟုတ် accept ကိုနှိပ်ပါ။ ယခု သင်သည် Windows Audio ဟုခေါ်သော ဝန်ဆောင်မှုကို ရှာဖွေရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို "restart" ဟူသော option ကိုရွေးချယ်ရန် သင့်မောက်စ်၏ညာဘက်ခလုတ်ဖြင့် ၎င်းကိုနှိပ်ရပါမည်။ ၎င်းပြီးနောက် Windows သည် နားကြပ်များကို တွေ့ရှိပြီး ၎င်းတို့မှတစ်ဆင့် အသံပြန်ထွက်လာခြင်းရှိမရှိ ထပ်မံစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
သင်၏ အသံထွက်ရှိမှု ဆက်တင်များကို စစ်ဆေးပါ။
ဒါက အရမ်းအဖြစ်များတဲ့ အရာဖြစ်ပြီး ဒါဟာ မင်းရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါက သူ့ဟာသူ ဘယ်လိုပုံစံပြောင်းထားလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူမှ အမိန့်မပေးဘဲ အရံပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုပြောင်းသွားတာလဲဆိုတာကို ငါလာကြည့်တာဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့် ဤအသံထွက်ရှိမှုပုံစံကို ပြောင်းလဲပြီး စစ်ဆေးရန် အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာရပါမည်။:
Windows bar တွင် စပီကာတစ်ခု၏ အိုင်ကွန်တစ်ခု ရှိနေသည်ကို ညာဘက်အောက်ခြေတွင် မြင်ရပါမည်။ Taskbar ပေါ်ရှိ ထိုအိုင်ကွန်ပေါ်တွင် Right Click နှိပ်ရပါမည်။ ယခုသင်သည် open sound settings ဟုခေါ်သော drop-down မှ option ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အခု ငါတို့ နေရာမှန်ရောက်နေပြီ၊ configuration စာမျက်နှာ၏ output အပိုင်းကို ရွေးချယ်ပြီး သင့်နားကြပ်များ ပေါ်လာကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ၎င်းတို့ကို Windows က မတွေ့ ရှိ/မရှိ ၏ စုစုပေါင်း အတည်ပြုချက်ဖြစ်သည်။
သင့်နားကြပ်တွေရဲ့ နာမည်ကို အဲဒီနေရာမှာ တွေ့ရင် အများအားဖြင့် သူ့ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ မော်ဒယ်၊ စာရင်းကိုပြသပြီး ၎င်းတို့ကို ရွေးချယ်ပါ။. ယခု သင်သည် အသံစက်ပစ္စည်း မန်နေဂျာ ရွေးချယ်မှုသို့ တိုက်ရိုက်သွားပြီး သင့်နားကြပ်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ထည့်သွင်းမှုကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဲဒီမှာ Windows က သင်လုပ်နိုင်တဲ့ စမ်းသပ်မှုနဲ့အတူ သူတို့ကြားတာကို ပြန်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီခလုတ်ကို နားကြပ် ဒါမှမဟုတ် မိုက်ခရိုဖုန်းပုံစံနဲ့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Drivers များကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
သင်၏ အသံကတ်ဒရိုင်ဘာများသည် ခေတ်မီခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် နောက်ဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ် သင့်အား အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီအတွက်သင်ရပါလိမ့်မယ်။ စက်ပစ္စည်းမန်နေဂျာကို သွားပါ၊ သင့်ကွန်ပြူတာ၏ အသံကတ်ကို ရှာပါ။ ပြီးလျှင် driver ကို update လုပ်ရန် option ကိုရွေးချယ်ရန် ၎င်းပေါ်တွင် right-click နှိပ်ပါ။
သင်သည် ထုတ်လုပ်သူထံ အလွန်ဒေသခံပြောဆိုထားပြီး ၎င်းကဲ့သို့ခံစားရပါက သို့မဟုတ် ဤနောက်ဆုံးနည်းလမ်းသည် သင့်အတွက် အလုပ်မဖြစ်ပါက၊ သင်သည် အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်း၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ သွား၍ ၎င်းတို့ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပါ။. လုပ်ငန်းစဉ်က အများကြီးမပြောင်းလဲဘဲ နှစ်ခုလုံးက သင့်အတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးသည် အထောက်အကူဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ထားပြီး Windows နားကြပ်များကို ရှာမတွေ့သည့် ပြဿနာကို သင်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ သင့်တွင် အကြံပြုချက်များ သို့မဟုတ် မှတ်ချက်များရှိပါက အောက်ပါမှတ်ချက်ဘောက်စ်တွင် ထားခဲ့နိုင်ပါသည်။ လာမည့် Mobile Forum ဆောင်းပါးတွင် ဆုံတွေ့ကြပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » Windows 10 သည် နားကြပ်များကို မတွေ့ပါက၊ ၎င်းကို မည်သို့ပြုပြင်မည်နည်း။
၎င်းသည် Windows 10 အတွက် အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံကြည့်ရှုသူဖြစ်သည်။
သင်္ချာသင်ပေးသော Minecraft ဂိမ်း